I-Clandon Victory Apartment No. 17 (Ukhenketho luyafumaneka) - I-Airbnb
I-Clandon Victory Apartment No. 17 (Ukhenketho luyafumaneka)
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi amabini anendawo yokulala evulekileyo netofotofo (#6), ekumgangatho wesibini ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex, ekwicomplex, eManchester. Ilungele abantu abathandanayo abahamba ngezoshishino nabantwana (abangaphezu kwe-2), abantu abaphuma entwasahlobo nabantu abazikhuphayo.
Kukho iincwadi kunye neemephu ezinenkcazelo ngesiqithi onokusifunda kunye/okanye uthathe kunye nawe. Siyafumaneka ukuba ufuna ukwalathiswa okanye amacebiso ngayo nayiphi na into eyenziwayo okanye iivenkile zokutyela.
IClandon Victory sisakhiwo seflethi esiyi-19 esinegumbi lokulala elinye, elala abantu ababini, elineebhedi ezimbini neKing. Iflethi okanye indlu ekwicomplex #6 iyakwazi ukusetyenziswa ngoAirbnb, kwaye inebhedi elala abantu ababini eneshawa. Ikhitshi linento yonke ibe unokulifumana kuphela ngexesha lokuhlala kwakho. Igumbi lokuhlamba impahla lisetyenziswa zizo zonke iindwendwe.
Xa zikumgangatho wesibini, iindwendwe ziza kunyuka inqwelo-moya eyi-1 kwizitebhisi, zizonke izitepsi eziyi-13 ukuze zifikelele kwi-Apt #6. Eli gumbi libalungele abantu abadala nabantwana abangaphezulu kweminyaka emibini. Iflethi imalunga nemizuzu eyi-55 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya i-Norman Manley International. Iindwendwe ezihlala eClandon Victory Apartment zifumanisa kulula ukusebenzisa iKnutsford Express eyenzelwe iMandeville, emva koko ziye kwiteksi ebhalisiweyo esuka eMandeville ukuya eScalding. I-Clandon Victory ayifumaneki nje lula xa ufika kwidolophu yaseScalding, kodwa ikwaneemizuzu eyi-7 xa uhamba ngeenyawo ukuya kwiFlethi okanye kwindlu ekwicomplex.
I-Clandon Victory Apartment ise-Scalding kumda weClarendon ne-Manchester kwaye imalunga neemayile eziyi-45 (okanye iikhilomitha eziyi-72) eNtshona ye-Kingston, isixeko esikhulu selizwe. Phezulu kwiinduli ezihonjiswe yindalo, i-Spalding yonwabela ubushushu bonyaka wonke kuma-70 aphantsi – umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu; ngokuqhelekileyo, akukho mfuneko yokufaka umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwizindlu. Iindwendwe ezihlala eScalding zikhuthazwa ukuba zinxibe ijezi okanye ijakethi ekhanyayo, nazo zize zithathe iimpahla ezifudumeleyo ebudeni bemini, njengoko imozulu ibanda kakhulu emva ko-4:00 emva kwemini.
Iflethi ijongene nentsapho kwaye ihleli kwangoko ukusuka eKnox Community College & High School edumileyo. Isondele kakhulu (yimizuzu eyi-4 xa uhamba ngeenyawo) kwi-Scalding High School.
Le ngingqi yindawo ebalaseleyo yokuhlala abanikazi bezoshishino kunye neengcali, ngokuyintloko ootishala beKnox College kunye neZikolo eziPhakamileyo, abafuna ukuba kufutshane neeofisi zabo kodwa kude kancinci nesiphithiphithi kwidolophu yaseScalding. Iflethi ikumgama omalunga nemizuzu eyi-7 xa uhamba ngeenyawo ukuya edolophini, apho zonke iimfuno zakho zokuthenga zinokufikelelwa. Kukho neLayibrari Kawonke-wonke ekwaziyo ukufikelela kwi-Wifi simahla. Imarike yasekuhlaleni ivula yonke imihla, apho unokufumana iziqhamo ezahlukahlukeneyo ezivuthiweyo zelanga, imifuno kunye nemveliso yomhlaba.
Xa iindwendwe zifika, ziza kufumana ithuba lokubona iividiyo ZEZINTO EZIMELE zenziwe kwi-Spalding.
Kukho iofisi yoLawulo kumgangatho osezantsi eClandon Victory Apartments, ngoko kukho umntu oza kukubulisa xa efika aze aqhelane neFlethi. Kodwa ke, njengoko sizixabisa izinto eziyimfihlo zeendwendwe zethu, kodwa ke, sigcina izinga lokusebenzisana kangangoko ufuna, Kwakhona, siyafumaneka kwaye sifumaneka lula nge-whatsapp.
Kukho iofisi yoLawulo kumgangatho osezantsi eClandon Victory Apartments, ngoko kukho umntu oza kukubulisa xa efika aze aqhelane neFlethi. Kodwa ke, njengoko sizixabisa izinto eziy…